५ रुपैयाँबाट ६३ लाख जुट्यो ! - Everest Dainik - News from Nepal
५ रुपैयाँबाट ६३ लाख जुट्यो !
विराटनगर, भदौ १८ । बृद्धाश्रमका लागि एक जनाबाट ५ रुपैयाँ दान सकलन गर्ने अभियानबाट ८ बर्षमा ६३ लाख संकलन भएको छ । महानगर ८ मा रहेको विराटेश्वर बृद्धाश्रम सञ्चालनका लागि एकजना व्यक्तिले चलाएको यो अभियानका लागि हालसम्म ४ लाख ९२ हाजर ९ सय ३ जनाले दान गरिसकेका छन् ।
अभियानकर्ता जगतप्रसाद अर्यालला अनुसार त्यति व्यक्तिबाट संकलित ५÷५ रुपैयाँ जोड्दा ६३ लाख रुपैयाँ पुगेको हो । कान्तिपुरमा खबर छ ।
ट्याग्स: Biratnagar, money, बृद्धाश्रम